Computer အတွက်လုပ်ဆောင်သင့်သောနည်းလမ်းများ (၅) | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Posted on September 4, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်… ခုတင်တဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ ကျွန်တော် ရေးလက်စ ဖြစ်တဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ လုပ်ဆောင်သင့်သောအချက်လေးများ ဆိုတဲ့ ထဲက အိုင်း (၅) ကိုဆက်လက်ရေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. လိုအပ်ချက်လေးများကို စုစည်းပြီး ကြိုးစား ရေးသားထားပါတယ်.. မပြည့်မစုံဘဲ လိုအပ်နေခဲ့ပါက… ကျေးဇူးပြုပြီး ထပ်မံဖြည့်စွက်ကာ လေ့လာပေးကြဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ…နော်…
ကဲစမယ်နော်… ပထမဆုံး မိမိတို့ ကွန်ပျူတာရဲ့ Win + R ကိုတွဲကလစ်ကာ Run Box ခေါ်လိုက်ပါနော်.
သည်နည်းကတော့Start Type တွေနဲ့ မလိုအပ်တဲ့ Services အချို့ကိုပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ Run ထဲကနေ “msconfig” လို့ရိုက်လိုက်ပီး System Configurationကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်…နော်…ကဲစပြီနော်..
အဲလို ထည့်လိုက်တာနဲ့ဘဲ System Configuration ဇယားကျလာပါပြီ
ဇယားရဲ့ အပေါ်က Startup ဆိုတာကိုကလစ်ပေးလိုက်ပါနော်.. နောက် ကျလာတဲ့ ထဲက မလိုအပ်တာတွေကို အကုန် အမှန်ခြစ် ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ… အားလုံးကို Disable all ဆိုပြီး အမှန်ဖြစ်အားလုံး ဖြုတ်ထားလည်း ပြဿနာမရှိဘူးနော် မိမိတို့သဘောပါ ကျနော်ကတော့ ၃..၄…ခုလောက်ဘဲ ထားပါတယ်.. ပုံမှာ နမူနာကြည့်စေခြင်လို့ လုပ်ပြထားတာပါ… သူက ၀င်းဒိုးတက်တာကို လေးလံစေပါတယ်… ဒါကြောင့် မလိုအပ်ပါက အမှန်မခြစ်ဖို့ ပြောခြင်ပါတယ်…
ကဲ ပြီးတာနဲ့ Apply လေးဘဲပေးထားလိုက်ပါ… OK မလိုသေးဘူးနော် သည်နေရာမှာဘဲ လုပ်စရာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်…ဆက်ကြမယ်…
Boot ကိုကလစ်လိုက်ပါ…..အပေါ် ကဘဲနော်…စောစောက Startup လိုမျိုးပေါ့နော်..
Boot ထဲရောက်တာနဲ့ ပထမ ညာဘက်က နံပါတ် (၂) နေရာက Timeout နေရာမှာ3seconds ကိုဘဲထားပေးလိုက်ပါနော်…ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ၀င်းဒိုးတက်တက်ချင်းရွေးချယ်စရာ (Dual Boot တင်ထားတယ်ဆိုရင်ပေ့ါ) OS တွေရှိရင်တော့3စက္ကန့်ပဲသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ၀င်းဒိုးအတက်ကိုမြန်ဆန်စေပါတယ်။နေဦး နောက် နံပါတ် (၃) Advanced options ဆိုတာကိုကလစ်လိုက်ပါ…
ကလစ်တာနဲ့ ညာဘက်က ဇယားလေး တခု ထပ်ကျလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်… ကျလာတဲ့ထဲက.. NumberProcessors ဆိုတာမှာ အမှန်ခြစ်ပါ သူ့ထဲမှာ နံပါတ် ဘယ်တိုင်းတာ ထိပါလဲ နောက်က မျှားလေးကိုကလစ်ကြည့်ပါ ပါလာတဲ့ ထဲက အမြင့်ဆုံးနံပါတ် ထိ ထားပေးလိုက်ပါ..အနော့်စက်ကတော့ 1-2 ဘဲပါတော့2ဆိုတာ ထားလိုက်ပါတယ်.. တချို့ဆို 1-2-3-4- ဆိုတဲ့ထိ ပါလိမ့်မယ်.. အမြင့်ဆုံးကိုသာရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါနော်..ပြီးတာနဲ့ ညာဘက်ကဇယားကို ok ပေးလိုက်ပါ..
မထွက်နဲ့အုံးနော် ပင်မ System Configuration ဇယားးကနေ ပေါ့..ကျန်တေးတယ်..ေိေိ
Services ကိုရောက်တာနဲ့ အပေါ်ပုံပါ သူလည်း အပေါ်ဆုံးက Stratup တုန်းကလိုပေါ့… မိမိတို့ မလိုအပ်သော အရာများကို အမှန်ခြစ် ဖြုတ်ပေး၇မှာ ဖြစ်ပါတယ်…..ပြီးတာနဲ့ Apply/Ok ရပြ်ီနော် ထွက်လို့..ေိေိ သည်လို နည်းလမ်းလေးတွေ လုပ်ပေးခငြ်းဖြင့် မိမိတို့ ကွန်ပျူတာလေးလည်း လန်းဆန်းပေါ့ပါးလာလိမ့်မယ်ဆိုတာ ယုံကြည် မျှော်လင့်ခြင်းဖြင့်… အဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေနော်….
Computer အတွက်လုပ်ဆောင်သင့်သောနည်းလမ်းများ (၁)
Computer အတွက်လုပ်ဆောင်သင့်သောနည်းလမ်းများ (၂)
Computer အတွက်လုပ်ဆောင်သင့်သောနည်းလမ်းများ (၆)
ခုလိုအားပေးတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ပြောကြားပါရစေ..ဘလော့ခရီးသည်မှ နည်းပညာများအား မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ကူးယူသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်.. ကျွန်တော် ပိုင်ဆိုင်သောနေရာလေးများအား ဆက်လက် လည်ပါတ်လိုပါက ဘလော့ခရီးသည်သို့ ဒီမှာ သွားလိုက်ပါလယ်တီမြေသားသို့ဒီမှာ သွားလိုက်ပါစာပေနန်းတော်သို့ဒီမှာ သွားလိုက်ပါ
This entry was posted in ကွန်ပျူတာနည်းပညာများ. Bookmark the permalink.
← Computer အတွက်လုပ်ဆောင်သင့်သောနည်းလမ်းများ (၄)	Locked File တွေ ကို Schedule လုပ်ပြီးဖျက်ပေးမယ့် Reboot Delete File Ex →